नेपाल टेलिकमको डाटा प्याक अनलाइनबाट कसरी किन्ने?
नेपाल टेलिकमको सेवा लिइरहनु भएको छ तर डाटा प्याकको मूल्य कति पर्छ, कसरी लिने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ? यदि यस्तो हो भने अब तपाईको समस्या सहजै समाधान हुने भएको छ। किनकी
टेलिकमले अनलाइनको माध्यमबाट किन्नमात्र होइन तिनको मूल्यसहितको जानकार पनि दिने भएको छ। मोबाइलबाट निशुल्क खोल्न मिल्ने टेलिकमको वेबसाइटमा गएर सस्क्राइब डाटा प्याक भन्ने आइकनमा क्लीक गरेर वा सिँधै एनटीसी डट एनइटी डट एनपी मा गएर खरिद गर्न सकिने भएको छ।
यसमा सबैभन्दा पहिले www.ntc.net.np वा http://offer.ntc.net.np/ जाने। त्यसपछि प्रिपेड वा पोष्टपेड छनौट गरेर प्याकेजको अप्सनमा क्लिक गर्ने। प्याकेजअनुसारको मूल्य आफै देखाएपछि मोबाइल नम्बर र त्यसपछिको अप्सनमा पीयूके (PUK) नम्बर राख्नु पर्छ। पीयूके नम्बर थाहा पाउनका लागि १४१५ मा एसएमएस गर्न सकिन्छ।
नेपाल टेलिकमको डाटा प्याकेज आफ्नो मोबाइलमा*1415# डायल गरेर पनि लिन सकिन्छ। त्यसैगरी १४१५ मा एसएमएस पठाएर पनि डाटा प्याकेज लिन सकिन्छ। तर ग्राहकको सुविधाका लागि अहिले अनलाइन माध्यमबाट समेत डाटा प्याकेज लिन सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमले हाल जीएसएममा रेगुलर, नाइट र फेसबुक डाटा प्याकेजको रुपमा विभिन्न अफर उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी सीडीएमए सेवामा रेगुलर र नाइट डाटा प्याकेज उपलब्ध छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १०, २०७४, ०४:४४:३४